स्वास्थ्य – KhabarChakra
उमेर नै नपुगी किन झर्छ कपाल, यस्ता छन् कारणहरु
हिजोआज कपाल झर्ने समस्याले धेरै मानिस तनावमा पर्ने गरेका छन् । धेरै ब्यक्तिहरु कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान भएको पाइन्छ । धेरैको गुनासो हुन्छ, मेरो उमेर नै पुगेकै छैन कपाल झरेर केही बाँकी छैन । आखिर किन झर्छ कपाल ? यस्ता छन कारणहरु १. शारीरिक तनाव शल्यक्रिया गरेको अवस्था, दुर्घटना, गम्भीर बिरामी अथवा सामान्य रुघा नै किन नहोस्, कपाल झर्छ ।[Read More…]
by KhabarC —	May 24, 2019 —	0 comments —	स्वास्थ्य
मधुमेहले आँखामा पार्ने असर र रोकथाम
रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी हुने अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ। मधुुमेह एक दीर्घरोग हो। जसले शरीरका संवेदनशील अंगहरु आँखा, स्नायु, मुटु, मिर्गौला र खुट्टामा खराब असर गर्छ। मधमेहका बिरामीहरुमा सामान्य व्यक्तिको तुलनामा दुई गुणा बढी आँखाको समस्या देखिन्छ। आँखामा हुने समस्यामध्ये डाइबेटिक रेटिनोपेथी दृष्टिविहीन गराउने कारणमध्ये एक प्रमुख कारण हो। के हो डाइबेटिक रेटिनोपेथी? मधुमेहको कारणले गर्दा दृष्टिपर्दाका रक्तनलीमा असर पुगी[Read More…]
by KhabarC —	May 23, 2019 —	0 comments —	स्वास्थ्य
स्तन दुख्ने समस्याबाट कसरी छुट्कारा पाउने ?
प्रायस्जसो धेरै महिलाहरु महिनावारीको समयमा स्तन दुख्ने समस्या झेलिरहने एक समस्या नै हो । स्तन दुखेकै कारण दैनिक काम गर्न पनि असहज पर्ने गर्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार महिनावारीको समयमा र कुनै हर्मोनमा आउने बदलाबका कारण स्तन दुखाइको समस्या देखिन्छ । त्यस्तै महिनावारीको समयमा स्तनको मांशपेशी खुम्चिने भएकाले पनि दुख्ने समस्या हुन्छ । यसरी स्तन दुख्ने समस्याबाट अब घरैमा आफैले उपचार[Read More…]
by KhabarC —	May 17, 2019 —	0 comments —	स्वास्थ्य
बिभिन्न रोगका लागि मेथीको साग
पौष्टिक एवमस्वास्थ्यकर मेथीको साग खानाले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुर्याउछ। बिशेष गरि यसमा प्रोटीन, फाइबर, भिटामिन सी, नियासिन, पोटाशियम र आईरन पर्याप्त मात्रामा पाईन्छ । यसका अतिरिक्त यसमा डियोसजेनिन तत्व पनि पाहिन्छ । यो तत्वका कारण बहुउपयोगी मेथी स्वास्थ्य र सौंदर्य दुवैका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । कब्जियतको समस्याबाट बचाउँछः कब्जियत वा पाचनसँबन्धी समस्या भएका मानिसहरुका लागि मेथी निकै उपयोगी मानिन्छ ।[Read More…]